ကချင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ရန်ကုန်မှ လိုင်ဇာအထိ လမ်းလျှောက် | ဧရာဝတီ
ကချင် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ရန်ကုန်မှ လိုင်ဇာအထိ လမ်းလျှောက်
နန်းသီရိလွင်| January 21, 2013 | Hits:2,268
| | ကချင်လွတ်လပ်ရေး အဖွဲ့ (KIO) အခြေစိုက်ရာ လိုင်ဇာမြို့ မြင်ကွင်း (ဓာတ်ပုံ – Steve Tickner / ဧရာဝတီ)
ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ရန်ကုန်မြို့မှ လိုင်ဇာမြို့အထိ ပထမဆုံး အကြိမ် လမ်းလျှောက်ချီတက်မှုကို ယနေ့နံနက် ပိုင်းတွင် စတင်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
“ကျနော်တို့ အဖွဲ့ အခု ထောက်ကြံ့နား(ရန်ကုန်မြို့မှအထွက်)ကို ရောက်နေပါပြီ။ ကချင်ပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကျနော် တို့ရဲ့လမ်းလျှောက် လှုပ်ရှားမှုဟာ တစုံတခုသော အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်”ဟု ဦးဆောင်သူ တဦးဖြစ်သည့် ကိုရန်နိုင်ထွန်း က ဧရာဝတီကို ပြောပြသည်။
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် လမ်းလျှောက်သူများတွင် အရပ်ဘက် လူမှု အဖွဲ့အစည်းများ၊ ရခိုင်လူငယ်အဖွဲ့၊ အမျိုးသားဒီမို ကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အဖွဲ့ဝင်များ၊ နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားသူများ စသည့် လူအင်အား ၅၀ ခန့် ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
လမ်းလျှောက် ချီတက်မှုကို တရက်လျှင် ၁၄ နာရီ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး မိုင် ၈၀၀ ကျော်ကွာဝေးသည့် လိုင်ဇာမြို့သို့ အရောက် ၄၅ ရက်ကြာမြင့်မည်ဟု ခန့်မှန်းကြောင်း ဦးဆောင်လှုပ်ရှားသူ တဦးက ပြောသည်။
“အရပ်ဘက် လူ့အဖွဲ့အစည်းတွေက မြို့နယ်အလိုက်ပေါ့ဗျာ၊ ရေက အစ တာဝန်ယူပြီးတော့၊ ကျန်းမာရေးက အစ လုပ်ပေးထားတာ တွေ ရှိပါတယ်။ အခု ပါဝင်တဲ့သူတွေ အားလုံးက ကိုယ့်စရိတ်နဲ့ကိုယ် လာကြတဲ့သူတွေချည်းပါပဲ။ သူတို့ရဲ့ စားရေး သောက်ရေး အတွက်ကတော့ ဒီ လမ်းတောက်လျှောက်မှာ ရှိတဲ့ ပြည်သူလူထု ကိုပဲ ကျနော်တို့ အားကိုးတယ်ခင်ဗျ”ဟု ၎င်းက ပြောဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ ခရီးရှည် လမ်းလျှောက်ချီတက်မှုအတွက် သက်ဆိုင်ရာသို့ အကြောင်းကြားခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက် တောင်းယူခြင်း တစုံတရာ မရှိခဲ့ကြောင်း၊ လတ်တလော ခရီးစဉ် တလျှောက် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အာဏာပိုင်များမှ တားမြစ်မှုများရှိကြောင်းလည်း ၎င်းက ဆိုသည်။
ကချင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် မုံရွာ၊ တောင်ငူ အစရှိသည့် မြို့ကြီးများတွင်လည်း ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုတောင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၃၀ ရက်နေ့က ကချင်ပြည်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့(KIO) နှင့် အစိုးရ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော် ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီတို့ နောက်ဆုံးအကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ၂ လအကြာ ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာလတွင် တိုက်ပွဲများ ပိုမို ပြင်းထန် လာခဲ့သည်။ လဂျားယန် ဒေသရှိ ပွိုင့် ၇၇၁ စခန်းကို အစိုးရစစ်တပ်က လေကြောင်း ပစ်ကူ တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် စစ်ရေးအရှိန် ဆက်လက်မြင့် တက်နေခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်န၀ါရီ ၁၄ ရက်တွင် အစိုးရတပ်များက လိုင်ဇာမြို့ လူနေ ရပ်ကွက်များထဲသို့ လက်နက်ကြီးဖြင့် မနက်ပိုင်းနှင့် ညပိုင်း နှစ်ကြိမ် ပစ်ခတ်ခဲ့သဖြင့် အရပ်သား ၃ ဦး သေဆုံးပြီး စုစုပေါင်း ၁၀ ဦးထက်မနည်း ဒဏ်ရာရရှိမှု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လမှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော ကချင်ပြည် လပ်လပ်ရေး တပ်မတော်(KIA)နှင့် အစိုးရ စစ်တပ်တို့၏ တိုက်ပွဲများကြောင့် ကချင်ပြည်သူ ၉၀၀၀၀ နီးပါး စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်များအဖြစ် စစ်ဘေးရှောင်စခန်းများတွင် နေထိုင်နေကြရကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ကချင်ပြည်နယ်ရှိ ထိုးစစ်များ ရပ်တန့်ရန် ညွန်ကြားထားသည်ဟု ဆိုသော်လည်း ဒီဇင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့မှ အစပြု၍ မြန်မာအစိုးရ တပ်မတော်သည် စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲများ ဆင်နွှဲခဲ့သည်။
ဇန်န၀ါရီလ ၁၈ ရက်နေ့တွင် အစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့က ဇန်န၀ါရီလ ၁၉ ရက် မနက် ၀၆၀၀ မှ စတင်၍ KIO ၏ ဌာနချုပ် တည်ရှိရာ လိုင်ဇာအနီးရှိ လဂျားယန်ဒေသအား ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းကို ရပ်ဆိုင်းလိုက်သည်ဟု သတင်း ထုတ်ပြန်ခဲ့သော်လည်း တိုက်ပွဲများ ဆက်လက်ဆင်နွဲနေကြောင်း KIO က ပြောဆိုသည်။
ကချင် နယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်းများတွင် စားနပ်ရိက္ခာ ပြတ်လပ်မြန်မာအစိုးရနှင့် KIA ယခုလအတွင်း ထပ်တွေ့မည်ကေအိုင်အေကို ဆက်တိုက်မည်ဟု ပြည်သူ့စစ်ခေါင်းဆောင် ပြောဦးဘရန်ရှောင်ကို ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ် ချမှတ်မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ပြန်စရန် ကချင် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များကို စည်းရုံး
pps၁၂၃၄၅ January 21, 2013 - 9:57 pm ကြည့်လည်း လုပ်ပါအုံး။ လိုင်ဇာ မရောက်ခင် တပ်မတော် အတွက် ပေါ်တာဖြစ်သွားအုံးမယ်။
Reply swe htwe January 22, 2013 - 12:21 am Carry on!! We are on behind you. By walking,peace process will be faster.
Reply AunG January 22, 2013 - 8:50 am good spirit…
Reply Ngwe Soe January 22, 2013 - 11:47 am Peaceful demonstration is many times more powerful than guns and bullets for the long run. It will hurt but the pain on your bodies will heal the Kachins. And it will encourage the people to stand for justice. God bless you guys.
Reply Aik Moon January 22, 2013 - 2:27 pm God bless you all and may God keep you all in peace!
Reply mgmglay January 22, 2013 - 4:51 pm သိပ်ကောင်းတဲ့အစီစဉ်ပါဘဲ။ကျနော်ကိုယ်တိုင်မလိုက်နိုင်ပေမဲ့အဝေးကနေဆုတောင်းပေးမယ်
နော်။အထူးသဖြင့် ကချင် ပြည်သူ အားလုံး ကို အရမ်းသနားမိပါတယ်။စစ်တပ်က ကချင် များကို
မချစ်ဘူးဆိုရင် ကျနော်တို့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားကိုလဲ သူတို့ဘယ် ချစ်နိုင်မှာလဲ။ ပညာ စကား
နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် စစ်တပ် က ဘယ်တိုင်းရင်းသား ကိုမှ မချစ်နိုင်ဘူးလို့ ပြောနေတာနဲ့ အတူတူ
ပါဘဲ။ အဲဒါ တောင်မှ ( ပြည်သူ့တပ်မတော် တဲ့လား)။ ပြည်သူကို မချစ်သော တပ်မတော်လို့
ရေးထားရင်တောင် မှန် နေတယ်။………ပြည်သူ အားလုံး ထဲက ပြည်သူ တစ်ယောက်။
Reply မင်းမင်း January 23, 2013 - 3:00 pm အရူးထကြသလားမသိဘူး။ လိုင်ဇာမှာ ကေအိုင်အေစစ်သားလုပ်ဖို့သွားကြတာ ဟုတ်မှာပေါ့